Hogaanka Nabadgaliyada DDS oo war culus soo saaray |
Hogaanka Nabadgaliyada DDS oo war culus soo saaray
Sida aan la wada socono waxaa maalintii shalay bilaabantay bisha barakaysan ee Ramadaan. Bishan oo ah bil shacabka islaamka ay sugaan sannadka oo idil ayaa waxaa ummada islaamka ay ugu talagashaa cibaado, istiqfaaro iyo camal suuban.
Inkastoo magaalada Jigjiga oo ah caasimada Degaanka Soomaalida ay tahay magaalo muslin hadana waxaa aad looga saluugaa inayna u firfircoonayn xilliyada bisha barakaysan ee Ramadaan sida ay u shidan yihiin magaalooyinka kale ee Soomaalidu degto ee Geeska Afrika.
Hadaba waxaa ilaa shalay la sheegayay in shacabka ay caqabado kala julmeen gaadiid yari habeenkii oo ayna jirin tagaasi iyo bajaajyo habeenkii shaqeeya. Cabashooyin badan ayaa baraha bulshada lagu tabiyay oo lagaga cabanayo in adeegyada bajaajta iyo takaasida uuna jirin habeenkii oo ay dhakhso xeroodaan.
Iyada oo taas laga duulayo ayuu Hogaanka Nabadgalyada Maamulka iyo Cadaalada Dawlad Degaanka Soomaalida Mudane Cabdi Caadil Xasan wuxuu soo saaray war saxaafadeed uu shacabka ku boorinayo inay adeega gaadiidka habeenkii ay noqdaan kuwo caadi ah. Wuxuu hogaanku sheegay in bataatanba ayna jirin xarayn iyo joojin dhanka dawlada.
“Wax xanibaad ah oo dhanka dawlada ka jira ma jiraan, shacabkuna waa bil barakaysane cabsida ha ka baxaan oo cibaadada iyo noloshooda sidii caadiga ahayd ha u raacdaan” ayuu yidhi Mudane Cabdi Caadil.
“Iskaashatooyinka bajaajyada iyo takaasida waa inay samaystaan jadwal tirada bajaajyada habeenkii shaqaynayasa ilaa suxuurta oo adeeg siiya shacabka.” ayuu yidhi Mudane Cabdi Caadil
Hogaanka oo tibaaxay in cibaadada iyo hawlaha diimeed ay shacabku u badan yihiin habeenka inay lama huraan tahay in ay helaan adeeg gaadiid oo u shaqeeya. Wuxuu mulkiilayaasha bajaajyada iyo basaska u soo jeediayay inayna xaraynin gaadiidkoodee ay ummada siiyaan adeega.